MADAXWEYNE LAFTA-GAREEN OO FARRIIN KU AADDAN Covid-19 U DIRAY SHACABKA KOONFUR GALBEED - Awdinle Online
MADAXWEYNE LAFTA-GAREEN OO FARRIIN KU AADDAN Covid-19 U DIRAY SHACABKA KOONFUR GALBEED
March 28, 2020 (Awdinle Online) –Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen ) ayaa farriin ku aaddan caabuqa Coronavirus (Covid-19) wuxuu u shacabka somaliyed gaar ahaan kuwa konfur galbed wuxuuna ayaa tilmaamay in ay ka go’an tahay Dowlad Goboleedkiisa ilaalinta badqabka caafimaad deeganada uu ka arimiyo .
Madaxweynaha ayaa xusay in caabuqan oo ku faafay dalal badan oo caalamka ka mid ah
Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu baaqay in dad ay la wadaagto fariimoyin badan oo ku saabsan caabuqa (Covid-19).
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Koonfur Galbeed in ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad iyo awaamiirta Wasaaradda ee lagaga hortagayo faafidda cudurka Covid-19 oo ay ugu horreyso in la yareeyo isu-socodka, safarrada iyo isu-imaanshaha laga maarmi karo.
Madaxweyne C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen ) ayaa faray mamulkiisa in ay dar-dar gelyaan tallaabooyinka iyo qorshayaal looga hortagayo cudurkan.
Sidoo kale, Madaxweyne Lafta-gareen ayaa ku adkeeyey dadka Soomaaliyeed in ay joogaan guryahooda, xil weyna ay iska saaraan badqabka naftooda iyo bulshadooda.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka in la joogteeyo ilaalinta fayo-dhowrka oo ay ugu muhiimsan yihiin dhiqidda gacmaha, yareynta
Previous articleXukuumadda oo dalbatay saddex sheybaar oo lagu baaro cudurka Coronavirus
Next articleShir ku saabsan Tamarta iyo Biyaha dalka oo ka furmay baydhabo:-(Sawiro)